Google Adsense ho an'ny sakafo | Martech Zone
Asabotsy, Aogositra 4, 2007 Alahady, Aogositra 19, 2007 Douglas Karr
Rehefa misokatra ny feed ary manao ny fangatahana sary dia mamadika an-tsehatra ilay sary amin'ny sidina i Google. Izany dia tsy maintsy atao toy izao mba hahafahana mifehy ny tetibolan'ny Advertiser. Raha lazaina amin'ny teny hafa, raha manana teti-bola $ 100 aho - rehefa ampiasaiko io teti-bola io, dia misy dokam-barotra hafa omena ho an'ny olona manaraka izay manokatra ny fahana.
Ny entana liana iray dia ny fisafidianana Blogger na Movable Type. Fa maninona no misy teritery amin'ny sehatra manokana? Misy teritery ve? Toa mety hitatra amin'ny tranokala misy RSS ity teknolojia ity. Raha ny Google dia tsy misy be loatra fampahalalana azo jerena ao amin'ny tranonkalany.
Manantena ny hisoratra anarana amin'ny Adsense for Feeds aho rehefa misy izany. Raha manana fampahalalana fanampiny ianao - omeo hevitra azafady amin'ny fanehoan-kevitra.